के गर्दै छन् एसएलसीका बोर्डफस्र्ट ? | नेपाल इटाली डट कम
March 27, 2010 — nepalitaly
एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट भएकाहरूबाट पक्कै पनि देशले ठूलो योगदानको अपेक्षा राखेको हुन्छ　। यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि हो　। तर, पछिल्लो पुस्ताका एसएलसी टपरहरू भने स्वदेशमा भन्दा विदेशमै रमाएको पाइन्छ　।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका अधिकांशले चिकित्सा पेसा रोजेका छन्　। उनीहरूमध्ये धेरैजसो विदेशमा छन्　। केहीले विदेशमा बसेर पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केही जागिर खाँदै छन्　। चिकित्सापछि इन्जिनियरिङ पढ्नेको जमात ठूलो छ　।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापहिलेका बोर्डफस्र्ट कोही सामाजिक र कोही राजनीतिक क्षेत्रमा लागेरसमेत ख्याति कमाएका छन्　। एसएलसी सर्वोत्कृष्टमध्ये ०२६ सालका एसएलसी सर्वोत्कृष्ट डा. बाबुराम भट्टराई　अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्　। डा. भट्टराई यसअघिको सरकारका अर्थमन्त्री भइसके　। अर्थमन्त्री हुँदा उनले गरेको कामबाट सन्तुष्ट हुनेको जमात ठूलो छ　। विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तित्व हुन्, उनी　। इन्जिनियरिङ पढेका भट्टराई देशको इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छन्　।
०२४ सालका सर्वोत्कृष्ट डम्बरबहादुर नेपाली चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाका संस्थापक हुन्　। परियोजना सफल भएपछि उनी एकाएक चर्चामा आएका थिए　। कामले यसरी चर्चामा आउने सर्वोत्कृष्टहरूमा कम छन्　। ०३१ सालका सर्वोकृष्ट किशोर थापा नेपाल सरकारका सचिव हुन्　। सचिव थापा जल तथा ऊर्जा आयोगमा कार्यरत छन्　। उनी निजामती सेवामा रहेर पनि राष्ट्रलाई योगदान दिन सकिने विश्वास राख्छन्　।
०५० सालकी सर्वोत्कृष्ट गरिमा राणा हाल बेलायतमा छिन्　। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलबाट उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी थिइन्　। एमबिबिएस नपढ्ने थोरै बोर्डफस्र्टमध्येकी उनी एक हुन्　। उनले आइएल, बिएल नेपालमै पढेकी हुन्　। एलएलबीमा पढ्ने वेलामा बिहे भएपछि बेलायतमा श्रीमान्सँगै बसेको बाबु लोकभक्त राणाले बताए　।
सरकारले ०५१ सालमा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीको नाम नै घोषणा गरेन　। ०५२ सालको एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट भएका आयाम लामिछाने अहिले जापानमा छन्　। वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरबाट एसएलसी दिएका लामिछानेले सिभिलतर्फबाट त्यहाँ अध्ययन गरेका थिए　। आयामका बाबु डा. पदमराज लामिछानेका अनुसार उनी अघिल्लो वर्ष नेपाल आएर बिहे गरेपछि अहिले जापानमा छन्　। उनी रिसर्च मेडिसिनअन्तर्गत सर्भिसमा लागेको बाबुले जानकारी दिए　। एसएलसी पास गरेर बूढानीलकण्ठबाट ‘ए’ लेभल पास गरेपछि उनी छात्रवृत्तिमा जापान गएको उनका बाबुले बताए　।
विश्वबन्धु बगाले ०५३ सालमा सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट भएका थिए　। सेन्ट जेभियर्समा साइन्स लिएर प्लस टू पढेपछि बगालेले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट एमबिबिएस गरेका थिए　। एमबिबिएस सकेपछि उनी केही समय हेल्पिङ ह्यान्डमा बिरामी जाँचेर बसे　। अहिले उनी लोकसेवाबाट मेडिकल अधिकृत आठौँ तहमा नाम निकालेर चितवनमा जागिर गर्दै छन्　।
०५४ सालमा सिद्धार्थ इंग्लिस मावि काभ्रेबाट एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट भएका मदनकुमार बडाल अहिले अमेरिकामा छन्　। उनले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट एमबिबिएस सकेका थिए　। एमबिबिएस सकेर चीनमा एक वर्ष अध्यापनसमेत गरेका थिए　।
०५५ सालका सर्वोत्कृष्ट वीरेन्द्र घिमिरे एसएलसी पास गरेदेखि नै विदेशमा छन्　। भिएस निकेतन स्कुलमा पढेर सर्वोत्कृष्ट भएका घिमिरेले एसएलसीलगत्तै बेलायतमा छात्रवृत्ति पाएका थिए　। बेलायतमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेपछि अहिले जर्मनीमा जागिर गरिरहेको भिएस निकेतनका संस्थापक डा. बाबुराम पोखरेलले बताए　।
०५६ की सर्वोत्कृष्ट सुम्निमा सिंह अहिले पाकिस्तानमा छिन्　। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी पाकिस्तानमा चिकित्साशास्त्र पढ्दै छिन्　। सुम्निमा साहित्यिक गतिविधिमा पनि संलग्न छिन्　।
०५७ सालमा झापाका स्वच्छन्द सोङमेन सर्वोत्कृष्ट भएका थिए　। एसएलसीपछि ह्वाइटहाउस कलेजमा साइन्स पढेर अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एमबिबिएस अध्ययन सकेर विदेश जाने तयारीमा छन्　। सोङमेनले जापालमा एमडी र पिएचडीमा छात्रवृत्ति पाएका छन्　। १९ चैतमा पाँच वर्षका लागि जापान जाँदै छन्　।
पोखराका सुयोग भण्डारी ०५८ सालको एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएका थिए　। उनी अहिले अमेरिकामा छन्　। पोखराको शिशु निकेतन स्कुलबाट एसएलसी दिएका भण्डारीले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट ‘ए’ लेभल पास गरेका थिए　। शिशु निकेतन स्कुलका डाइरेक्टर हरिश आरकेका अनुसार भण्डारी अहिले अमेरिकामा फिजिक्समा मास्टर्स गर्दै छन्　।
०५९ सालका सर्वोत्कृष्ट विशाल ज्ञवाली र ०६० का विशाल खनाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा एमबिबिएस पढ्दै छन्　। सर्वोत्कृष्ट दुवैजनाले रूपन्देहीबाट एसएलसी दिएका थिए　। ज्ञवालीले न्यू होराइजन र खनालले एभरेस्ट बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी दिएका हुन्　। ज्ञवालीले एसएलसीपछि ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल र खनालले क्यास्पियन भ्याली कलेजमा ‘प्लस टू’ गरेर अहिले एमबिबिएस पढिरहेका छन्　।
समीर श्रेष्ठ ०६१ मा काभ्रे माविबाट एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट भएका हुन्　। उनी एसएलसीमा सर्वोकृष्ट घोषित हुने अन्तिम विद्यार्थी हुन्　। समीरले अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेको बताए　। उनले एसएलसी दिएर क्यास्पियन भ्याली कलेजमा अध्ययन गरेका थिए　। श्रेष्ठले एमबिबिएस सकेर नेपालमै सेवा गर्ने सोच रहेको बताए　।
०४६ का राजन शर्मा र ०४८ का प्रवीणदेव पाठक पनि विदेशमै छन्　। ०६२ सालयता एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीको नाम घोषणा गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ　।
१९९०　पुष्पभक्त मल्ल
१९९१　यदुनाथ खनाल
१९९२　गोपालप्रसाद रिमाल
१९९३ श्यामकृष्ण गौतम
१९९४ चन्द्रदेव ओझा
१९९५ तीर्थप्रसाद प्रधान
१९९६ भरतप्रसाद प्रधान
१९९७ भुवनलाल प्रधान
१९९८ रेणुलाल सिंह
१९९९ तीर्थबहादुर प्रधान
२००० ज्ञानमणि आचार्य दीक्षित
२००१ विष्णुप्रसाद धिताल
२००२ रञ्जनमान शर्मा
२००३ उपेन्द्रमान मल्ल
२००४ भवानीशंकर राजवंशी
२००५ दामोदरप्रसाद कायलाद
२००६ शैयादमोहन शाह
२००७ नन्दकिशोर अग्रवाल
२००८ महवीरप्रसाद अग्रवाल
२००९ बाबुलाल अग्रवाल
२०१० पुरुषोत्तमनारायण श्रेष्ठ
२०११ दमलाल श्रेष्ठ
२०१२ रामबाबु शर्मा
२०१३ आनन्दमानसिंह अमात्य
२०१४ दिव्यरत्न शाक्य
२०१५ प्रकाशचन्द्र जोशी
२०१६ शिवप्रसाद अधिकारी
२०१७ रमेश शर्मा भट्ट
२०१८ प्रचण्डराज शाह
२०१९ रमेशानन्द वैद्य
२०२० दीपक बज्राचार्य
२०२१ भेषराज कँडेल
२०२२ महेन्द्रनाथ शर्मा
२०२३ प्रकाश मानन्धर
२०२४ डम्बरबहादुर नेपाली
२०२५ भक्तबहादुर आले
२०२६ बाबुराम भट्टराई
२०२७ आंगिता छिरिङ शेर्पा
२०२८ द्रेनप्रकाश रसाइली
२०२९ राजेन्द्रकुमार कवा
२०३० प्रमोदराज पोखरेल
२०३१ किशोर थापा
२०३२ रामचन्द्र शर्मा
२०३३ बलराम पाण्डे
२०३४ अनिलबहादुर तुलाधर
२०३५ विजयकृष्ण श्रेष्ठ/सतिस बजाज
२०३६ उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ
२०३७ द्वारिका श्रेष्ठ
२०३८ अच्यूतबाबु तिवारी
२०३९ लुना भट्ट
२०४० निशा धौभडेल
२०४१ शम्भुशरण शाह
२०४२ राजनलाल प्रधान
२०४३ दीपककुमार सिंह
२०४४ प्रमोद आचार्य
२०४५ राजेन्द्र गुरुङ
२०४६ राजन शर्मा
२०४७　मानव भट्टराई
२०४८　प्रवीणदेव पाठक
२०४९　प्रकाश थपलिया
२०५०　गरिमा राणा
२०५१ सर्वोकृष्ट घोषणा गरिएन
२०५२　आयाम लामिछाने
२०५३　विश्वबन्धु बगाले
२०५४　मदनकुमार बडाल
२०५५　वीरेन्द्र घिमिरे
२०५६　सुम्निमा सिंह
२०५७　स्वच्छन्द सोङमेन
२०५८　सुयोग भण्डारी
२०५९　विशाल ज्ञवाली
२०६०　विशाल खनाल
२०६१　समीर श्रेष्ठ
« तपाईं जिन्दगी देखि कत्तिको दुखी र निराश हुनुहुन्छ?
न्याय रक्षक »